Paris ပါရစ်က နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၄ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Paris ပါရစ်က နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၄ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ)
Paris ပါရစ်က နံမယ်ကျော် Louvre ပြတိုက် – ၄ (၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ)
Posted by Kyaemon on Nov 20, 2013 in Arts & Humanities, Celebrity, Cultures, Education, Entertainment, Photography, Travel | 21 comments
Cleopatra France Louvre Paris
လူကြီးလူကောင်းတွေကဘဲ Louvre ပြတိုက်ကို လိုက်ကြည့်ရအောင်၊
(အူးကြောင်အီး မ ပါဘူးနော်၊တော်ကြာ ကြောင် မ ကတော် ဆီ မပြန်တော့မှာစိုးရတယ်)
အီဂျစ်ပြခန်းမာ ကလီယိုပတ်ထရာပုံ မရှိဘူးလားဟင်…
Wow က အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့Cleopatra ကလီယိုပတ်တရာ လာပါပြီ၊
ရွှေမင်းသမီးတွေ နောက်မှထွက်နေကြ အစဉ်အလာ ကနေ
သူ့ကို ချွင်းချက်ပြုပြီး ပွဲထုတ်လိုက်ပါ၏
စစ်ရှုံးတဲ့နောက် သေပွဲဝင် တဲ့ပုံတွေပါ၊
အများစုက မြွေပွေး ကိုတမင်ပေးကိုက် ပြီး သေတယ် လို့ရေးတယ်၊
Cleopatra – Wikipedia, the free encyclopedia
Cleopatra VII Philopator (Greek: Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ; Late 69 BC – August 12, 30 BC), known to history as Cleopatra, was the last pharaoh of Ancient Egypt. She wasamember of the Ptolemaic dynasty,afamily of Greek origin that ruled Ptolemaic Egypt after Alexander the Great‘s death during the Hellenistic period. The Ptolemies, throughout their dynasty, spoke Greek and refused to speak Egyptian, which is the reason that Greek as well as Egyptian languages were used on official court documents such as the Rosetta Stone. By contrast, Cleopatra did learn to speak Egyptian and represented herself as the reincarnation of an Egyptian goddess, Isis.
To this day, Cleopatra remainsapopular figure in Western culture. Her legacy survives in numerous works of art and the many dramatizations of her story in literature and other media, including William Shakespeare‘s tragedy Antony and Cleopatra, Jules Massenet‘s opera Cléopâtre and the 1963 film Cleopatra. In most depictions, Cleopatra is portrayed asagreat beauty, and her successive conquests of the world’s most powerful men are taken as proof of her aesthetic and sexual appeal.
ဗမာပြည်မှာ အဲလိုဥပဒေကိုလုံးဝကိုမလိုက်နာကြတာမို့.. ပြောကာမှပိုကြည့်သွားကြပုံရတယ်..။
ဒီတစ်သက် အဲ့ပြဒိုက်ကို မရောက်ရောက်အောင်ကို
ကိုကိုကြောင်တို့ သဂျီးတို့ ပြောတော့ အဲ့လာကို တနေ့ ၅မိနစ်ကျိပေးရင် အသက်ရှီတယ်ရှို…
အသက်ရှီဆေး ကိုများဗျာ … ဆင်ဆာဖြတ်ရဒယ်လို့ ….
ကတောက် …Ailee ပဲ သွားကြည့်တော့မယ်
ကွီယိုပါထွာ ဆိုတော့ကာ ..ဒေါင်းဥလောက်လေးနေမှာပါဂျာ…ကိုယ်တွေက ကျွဲကောလောက်မှလူထင်တာ…အဟိဟိ…
အဲလီဇဘက်တေလာရဲ့ ကလီယိုပတ်ထရာကို ပြန်ကျိရတော့ ပုံထဲကအတိုင်း ရွေခေါင်းဆောင်းကြီးနဲ့ အတော်ကိုလှပါတယ်… ပြခန်းမှာတော့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေကလှပြီး ပန်းချီတွေမှာတော့ ခါးတုတ်ဗိုက်ပူကြီးလားလို့…
လှပါတယ်ဆိုတဲ့.. ဗီးနပ်စ်လည်း.. ရုပ်ထုရော.. ပန်းချီရော.. ခါးတုတ်ဗိုက်ပူပဲ…
အဲဒီခေတ်က.. ခါးတုတ်ဗိုက်ပူ.. တင်ကြီးတာတွေကြိုက်လို့ထင်တာပဲ..။
ဒီ ကလီယိုပါထရာလောက်လေးးးကို သကောင့်သားတွေ ဂလောက်ဖြစ်နေကြတာ။
နာ့ မြင်ရင် ရူးသွားမှာပဲ။
သင်္ဘောပေါ်မှာ ကော်ဇောလိပ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ပုံ။
အဟမ်း… အဟမ်း… နာရူးမှာလား သူတို့ရူးမှာလားဟင်… မရှင်းမရှင်းမလုပ်ပါနဲ့
အဲလို တည့်တည့် မေးတော့ သများ ဘယ်လိုဖြေရဲပါ့မလဲ။
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (ခလက်ဒစ် တူ ဘဖော)
ရုပ်ရှင်ထဲက ကီလီယိုပါထွာကလှဒယ်။ ဒီအစစ်ကလှဘူးပဲ
သူတို့ခေတ်တုန်းက အဲ့လိုကိုးးးးး ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ် ဆိုတာ ခုမှပဲနားလည်တော့တယ် အာ့ကြောင့် ထင် ပါရဲ့
ခုခေတ် ဂလို ဂလို့့
….တွန့်တိုစရာမရှိတွန့်တိုတဲ့ ကြေးဂျီးကို…မုန်းတယ်x အခါတစ်သိန်း…ခုခွိ..ခုခွိ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်ပြုတဲ့ မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးကို ဆန့်ကျင်ဂျ…
နန်းခင်ဝင့်ဝါ မိုးစက်ထက်ထက်ချာ says:
ဦးမှုန်ယီး သာမီးတို့ဂို ဘာရို့မကျိခိုင်းဒါလဲ ဟင်
ကိုကိုကြောင့် ကို ကြောက်လို့တဲ့ …ဟိ…
ကျော်ကတော့ ကျန်တဲ့ မှုန်တွေဖြစ်တဲ့ ..၀တ်မှုန်ငွေချည် နဲ့ … ချွေမှုန်ရတီ လေးတို့ဆီပဲ အားပါးတရ သွားကြည့်တော့မယ်..
လက်ရာမြောက်လိုက်ပုံများ အောက်ကမွေ့ယာအစစ်လားလို့တောင် ကိုင်ကြည့်ချင်လာတယ်…
စကျင်ကျောက်ဆိုတော့ အေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ ဘေးမှာတောင် ၀င်အိပ်လိုက်ချင်သေးတယ်…
အဲဒီမှာရှိတဲ့ Orsay ပြတိုက်… (ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးတဲ့ပြတိုက်) ထဲမှာ…
အဲ့ထက်ဆိုးတဲ့ပုံတွေအများကြီး… ခေတ်အစောဆုံး ပရိုနိုဂရပ်ဖီတွေရှိတယ်လို့ပြောရင်တောင်ရတယ်…
ဗင်းဆင့်ဗင်ဂေါ့ခ်ျရဲ့ စတယ်ဒီနိုက်လဲ အဲ့မှာရှိတယ်…
ပိုစ့်ကဒ် စကင်ဖတ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့… ဟီး…
နျုဒ် ဂလေးမားရပ်စ် အီရော့်တစ်ခ် ပေါ်နိုဂရပ်ဖ် ကို လေနဲ့ ၀မ်း မကွဲသူ နောက်တျောက်ပါဒကား …။
သေချာသွားရှာကြည့်ပေးတော့သားရေ… အဲဒါ နျုဒ့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာ… ဟိ
ထပ်တင်လိုက်တဲ့Elizabeth Taylor as Cleopatra ပုံတွေကိုရှုစားခံစားကြပါရန်
“… တွန့်တိုစရာမရှိတွန့်တို ….” အတွက် တင်ပြလိုတာ က
အနောက်တိုင်းက ဗဟုသုတ တွေကိုရယူရင်း၊
ပုံတိုင်း ပုံတိုင်းမှာ ရှူမငြီးနိုင်တဲ့အကွက်တွေက အများကြီး၊
ဒိအပြင် ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ ပုံပေါင်းလဲ မနဲလှပါ၊
” ကြောင်ချစ်တီး” ကိုလဲဆော်ဩပေးပါအုံးနော်၊